Litecoin छ - Blockchain समाचार
फेब्रुअरी 4, 2018 व्यवस्थापक
Litecoin (LTC) चार्ली ली द्वारा सिर्जना गरिएको थियो, एक पूर्व Google कर्मचारी र कोइनबेस मा ईन्जिनियरिङ् को पूर्व-निर्देशक. Litecoin मा खुला-स्रोत ग्राहक मार्फत जारी थियो जो Bitcoin कोर ग्राहक को एक काँटा छ GitHub. Litecoin अक्टोबर मा जारी भएको थियो 2011. एकदम लामो समय को लागि, यो बजार टोपी द्वारा दोस्रो cryptocurrency भएको थियो. मान्छे किन यसलाई भनेर हो “डिजिटल चाँदी।” क्षणमा, Litecoin छैटौं आउँछ, Bitcoin गर्न गुमेको, Ethereum, लहर, Bitcoin नगद र Cardano. बजार टोपी छ $8.383.386.336, र 1 LTC बराबर 0,01799050 BTC, वा $152,24. वर्षको लागि 2017, मूल्य गरेर rocketed छ 1,250%.
को Litecoin नेटवर्क उत्पादन निर्धारित छ 84 लाख litecoins, जो Bitcoin धेरै मुद्रा एकाइहरु रूपमा चार पटक हो. बस Bitcoin जस्तै, Litecoin mined छ. एक त आफ्नो एकान्त उद्यम नेतृत्व वा क्लाउड खनन सामेल हामी यी मात्र सिफारिश गर्न सक्छन् सक्नुहुन्छ3कम्पनीहरु Hashflare, IQMining वा उत्पत्ति खनन. यसको SHA256 संग Bitcoin विपरीत, Litecoin यसको प्रमाण-को-काम ह्याशिङ अल्गोरिदम रूपमा scrypt को एक सरल संस्करण रोजगार. यसको प्रदर्शन स्मृति ठूलो रकम लागि पहुँच मा भारी निर्भर.
धेरै मानिसहरू अक्सर सुन Bitcoin तुलना, यो एक आदर्श लगानी विकल्प हो भन्दै. राम्रो त, Litecoin पैसा-आवश्यक कार्यक्षमता संग विनिमय को मध्यम रूपमा हेरिएको सकिएन. Litecoin गरेको अनुमानित ब्लक पुस्ता समय छ 2.5 मिनेट बनाम 10 Bitcoin लागि मिनेट, जो छिटो पुष्टि समयमा थप लेनदेन अर्थ.
यसबाहेक, Litecoin अलग साक्षी सक्रिय छ (पछि) र चट्याङ्ग नेटवर्क तैनाथ (LN), जो एकदम सञ्जालको क्षमता सुधार. र अणु लेने प्रविधि Litecoin Bitcoin लागि सीधा साटासाट गर्न सक्षम, Ethereum, Vertcoin, र Decred-blockchains पनि परमाणु विनिमय प्रयोग.
माथि उल्लेख सबै प्रविधिहरू पहिलो शुरू र Litecoin नेटवर्क मा परीक्षण गरियो. टोलीमा निरन्तर यसको उत्पादन राम्रो बनाउन प्रयास गरिएको छ. Litecoin Bitcoin भन्दा छिटो र थप लचिलो छ, जो यो वास्तविक द्रुत तिनीहरूलाई नयाँ विचार र प्रयोग प्रयास गर्न को लागि अनुमति दिन्छ.
मेरो विचारमा, Litecoin गरेको प्रमुख-र सबै भन्दा गम्भीर-प्रतियोगी Bitcoin छैन तर Zcash. यसलाई गोपनीयता-संरक्षण लेनदेन प्रदान गर्दछ कि Zerocash प्रोटोकल मा निर्मित गर्नुपर्छ. यो कि cryptocurrency लागि समर्थन मा बनाउनुभयो एडवर्ड Snowden आउन गुमनाम छ, यो कल “सबैभन्दा रोचक Bitcoin वैकल्पिक।”
र प्राविधिक पक्ष बाट, Litecoin Litecoin लोकप्रियता को मामला मा Bitcoin outplay सक्छ खुद्रा transactions.There गरेको कुनै तरिका को लागि सबै भन्दा राम्रो cryptocurrency बन्न सबै संभावना छ. तर cryptocurrency उद्योग परिपक्व रूपमा, केही डिजिटल मुद्राहरू पाउन पहिचान गर्न सक्षम हुनेछ.
SatoshiLite द्वारा ट्वीट
Blockchain वेधशाला र फोरम Blockchain टेक को "Forefront" गर्न ईयू ल्याउन
यूएस Blockcha शुरूआत ...
Bitcoinब्लक श्रृंखलाक्लाउड खानीcryptocurrencylitecoinखानीनेटवर्क
अघिल्लो पोस्ट:नयाँ प्रोटोकल प्रेत चट्याङ्ग नेटवर्क संग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ
अर्को पोस्ट:deVere समूह cryptocurrency व्यापार अनुप्रयोग शुरूआत